China Glucoraphanin cas 21414-41-5 fekitori inopesana nekuzvimba uye vatengesi | Minshang
Tidaidzei: + 8813073165382
Glucoraphanin cas 21414-41-5 inopesana nekuzvimba
Glucoraphanin, yakasikwa glucosinolate inowanikwa mune cruciferous miriwo, inogadzikana inotungamira yeNrf2 inducer sulforaphane, ine antioxidant, anti-kupisa, uye anti-carcinogenic mhedzisiro
Kemikari & Panyama Zvivakwa
Glucoraphanin Biological Chiitiko
Kusainira Nzira >> Vamwe >> Vamwe
Nzvimbo dzekutsvagisa >> Gomarara
Natural Zvigadzirwa >> Saccharides uye Glycosides
Glucoraphanin inoderedza huremu uye inowedzera simba rekushandisa mune HFD-dzakadyiwa mbeva. Glucoraphanin inogona kuvandudza insulin senzwi uye kushivirira kweglucose muHFD-yakadyiwa mbeva. Nekudaro, Glucoraphanin haiite antiobesity uye insulin-inosimudzira mhedzisiro muNrf2 - / - Mice. Glucoraphanin inovhara HFD-inokonzeresa kudzikisira kweUcp1 mapuroteni mazinga machena adipose madepoti emusango-mhando mbeva asi kwete muNrf2 - / - mbeva. Glucoraphanin inoderedza HFD-inosimudzira hepatic steatosis uye oxidative kusagadzikana. Glucoraphanin inodzvinyirira HFD-inosimudzira proinfigueatory activation yemacrophages muchiropa uye adipose tishu. Glucoraphanin inoderedzawo kutenderera kweLPS uye huwandu hwakawandisa hweproteobacteria mumatumbu ma microbiomes emakonzo anodyiswa neHFD . Makonzo ane pellets anosanganisira 0.1% Glucoraphanin (GF) anonyanyisa anodzikisira kudzikira kwenzvimbo yekudzivirira nzanga mumakonzo akashushikana. Mune 1% sucrose yekuyera bvunzo (SPT), kurapwa nemapellets anosanganisira 0.1% GF zvakanyanya kudzvinyirira yakaderera sucrose sarudzo yemakonzo akashushikana .
Varume C57BL / 6JSlc makonzo ane mavhiki manomwe ezera. Iyo Nrf2 yekugogodza (Nrf2 - / -) mbeva kushushikana kunoshandiswa muyedzo. Mushure me1 vhiki yekuwedzeredzwa, mbeva dzinopihwa zvakajairwa chow (NC) (iine 2.2% dextrinized cornstarch, 10% kcal kubva kumafuta), NC ine 0.3% glucoraphanin (NC-GR) (iine 2.2% yekubvisa poda), HFD (iine 2.2% dextrinized cornstarch, 60% kcal kubva kumafuta), kana HFD ine 0.3% glucoraphanin (HFD-GR) (iine 2.2% yekubvisa poda) kwemavhiki gumi nemana. Ese ari maviri NC uye HFD ine chibage kana glucoraphanin yakagadzirirwa. Yese mbeva dzakadzidzwa dzinochengetwa pane 12-h mwenje / rima kutenderera pa24-26 ° C ine yemahara kuwana mvura uye chikafu.
Taura nesu: luly Whatsapp: + 8813073165382 Email: luly@hbminshang.cnQ1: Wako Unhu Hwako Hwakagamuchirwa neTatu Bato Lab? A: Hongu, Zvese zvigadzirwa zvakaomeswa kuyedzwa neQC yedu, yakasimbiswa neQA uye yakatenderwa neyechitatu bato lab muChina, USA, Canada, Germany, UK, Italy, France nezvimwewo Saka iwe uchavimbiswa neGood Quality kana ukatisarudza isu . Q2: Unoita sei kunyunyuta kwemhando yepamusoro? A: Chekutanga pane zvese, dhipatimendi redu reQC richaongorora zvakanyanya zvigadzirwa zvedu zvekutengesa kunze neHPLC, UV, GC, TLC zvichingodaro kuitira kudzikisa dambudziko remhando yepamusoro kusvika zero zero. Kana paine dambudziko rehunhu chaihwo, rakakonzerwa nesu, tinokutumira zvinhu zvemahara zvekutsiva kana kudzorera kurasikirwa kwako. Q3: Unogamuchira Sample Order? A: Ehe, isu tinogamuchira diki odha kubva ku10g, 100g uye 1kg yeako ongororo yemhando yezvinhu zvedu. Q4: Pane chero chakaderedzwa here? A: Ehe, kune yakakura huwandu, isu tinogara tichitsigira nemutengo uri nani. Q5: ndeapi mazwi ekubhadhara aunogamuchira? A: tinoda kubvuma kuendeswa kubhangi, Western Union kana Moneygram kana BTC Q6: Zvinotora nguva yakareba sei kuti zvinhu zvasvika? A: Zvinoenderana nenzvimbo yauri, Kune diki odha, ndapota tarisira mazuva mashanu neDHL, UPS, TNT, FEDEX, EMS. Zvekuraira kwakawanda, ndapota tendera mazuva mashanu kusvika kumakumi masere neMhepo, mazuva makumi maviri nemakumi matatu nemashanu neGungwa Q7 Une chero mutemo wekudzosera? A: isu tine yakanaka mushure mekutengesa sevhisi uye zvakare-kutumira mutemo kana pasuru ikarasikirwa Kusangana kwedu kwenguva refu nevatengi vedu kwakaunza mabhenefiti makuru Isu tinogara tichitarisira zvakanyanya mupaketi yezvigadzirwa zvedu vatengi vedu vanozosimbisa izvi sezvo kunyangwe ivo vachinetseka uzviwane pasina rubatsiro pane dzimwe nguva. Asi kunyangwe nekuedza kwedu kukuru kuchiri kugona kunotora mashoma mapakeji. Mune ino mamiriro ezvinhu tinovimbisa reship yemahara yekumisikidza kwenguva yakareba hukama Q8: Ndingawana muyenzaniso? A: Ehe saizvozvo. Kune akawanda zvigadzirwa isu tinogona kukupa iwe yemahara sampuro, nepo mari yekutumira ichifanira kuitisa padivi pako.
Pashure: Cas 75-12-7 Formamide masampuli ekutsigira uye kuyedza muchitoro
Zvadaro: Acetaminophen Powder Paracetamol API CAS 103-90-2 Paracetamol Raw Chinyorwa Chakachena Chakachena
Cas61-54-1 tryptamine Fekitori yakananga muchitoro
Cas236117-38-7 2-iodo-1-p-tolylpropan-1-imwe sup ...
Cas148553-50-8 Pregabalin Pharma Giredhi Pregabal ...
cas1451-82-7 2-Bromo-4'-methylpropiophen ...
Cas 96-48-0 GBL China mutengesi wegamma-Butyrolactone
Cas 75-12-7 Formamide rutsigiro ivhu uye testi ...
Cas 62-44-2 Phenacetin China fekitori
Cas 55-22-1 Isonicotinic acid rutsigiro sampuli a ...
Cas 103-63-9 (2-Bromoethyl) benzene
Cas 102-97-6 Benzylisopropylamine isopropylbenz ...
99% Purity 4-Amino-3, 5-Dichloroacetophenone CA ...
WhatsApp / Chiratidzo: + 88130303165382